टोटल धमालको गीतमा यी दुई युवतीको यस्तो धमकेदार डान्स , डान्स गरेको भिडियो भयो रातारात भाइरल (भिडियो) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > टोटल धमालको गीतमा यी दुई युवतीको यस्तो धमकेदार डान्स , डान्स गरेको भिडियो भयो रातारात भाइरल (भिडियो)
admin February 24, 2019 भिडियो 0
काठमाडौँ – पछिल्लो समय बलिउडमा कमेडी फिल्मको लहरै चलेको छ । त्यस्तै कमेडी नै कमेडीले भरिएको फिल्म टोटल धमाल यहि फ्रेब्रअरी २२ मा रिलिज भएको छ । निकै हसाउँने यस फिल्मले धमकेदार व्यापार गरेको छ। यसैकममा अहिले मुम्बइका दुई युवतीको डान्स सामाजिक संजालमा निकै भाइरल भइरहेको छ ।यी दुई युवतीले अभिनेता अजय देवगनको फिल्म टोटल धमालको गीत मुंगडा मा धमकेदार डान्स गरेका छन् । जुन डान्स अहिले सामाजिक संजालमा निकै भाइरल भइरहेको छ ।
फिल्म टोटल धमालको यस गितमा अभिनेत्रि सोनाक्षी सिन्नहा छिन् । यी दुई युवतीले गरेको डान्स भने सोनाक्षीको भन्दा राम्रो भएको टिप्पणी गरिएको छ । बलिउड गीतमा डान्स गरेर सामाजिक संजालमा अपलोड गरिरहने यी युवतीहरु पेशाले कोरियोग्राफर हुन् ।यीमध्ये एक युवतीको नाम सोल देवराज र अर्की युवतीको नाम निकोल कन्सेशाओ हो ।हेर्नुहोस् भिडियो
दलित भएकै कारण किन यस्तो? घिस्रिएर जीवन काट्दै यी ब्यक्ति ! (भिडियो)
सुजिताको पोष्टमार्टम रिपोर्टमा के आयो ? यस कारण रिसाए सुजिताका परिवार (भिडियो हेर्नुस्)